Some random thoughts of mine – Sometimes little things make people think big ….
Sometimes little things make people think big ….
August 19, 2017 zinyawlwinLeaveacomment
July 9, 2017 zinyawlwinLeaveacomment
ဟိုတနေ့က ဘဝမှာ ပျော်အောင်နေရမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး ကိုယ့်ဘာသာကို သတိပေးတဲ့ အနေနဲ့ ရေးဖြစ်တယ် ဒါမယ့် မနေ့က ဘဝကို ရောင့်ရဲ တင်းတိမ် မနေသင့်ကြောင်း ကို ရတဲ့ လခ နဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြောသွားတာကို ရှဲနေကြတာ တွေ့လိုက်လို့ ထပ်ပြောချင်စိတ်ပေါက်လာလို့ ကိုယ်တွေလဲ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အများသူငှာတွေ လိုပဲ ကြီးလာရင် ပိုက်ဆံ အများကြီး ရှာနိုင်တဲ့ ဆရာဝန်ကြီး ဖြစ်ရမယ် အင်ဂျင်နီယာကြီး ဖြစ်ရမယ် သူဌေးကြီး ဖြစ်ရမယ် လို့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တာပေါ့ ။ ဒါ ဘာထူးဆန်းလဲ societal standards လို့ခေါ်တဲ့ လူ့အသိုက်အဝန်း က သတ်မှတ်ပေးထားကြတဲ့ အဆင့်တွေမှာ မြင့်သထက်မြင့်အောင် ကြိုးစားကြတဲ့ လူတွေပေါ့ ။ ချမ်းသာ… Continue reading ပျော်ရွှင်မှု
May 30, 2017 zinyawlwinLeaveacomment
Book recommendation Beneath A Scarlet Sky by Mark Sullivan အမ်မဇွန် (အမေဇုန် မဟုတ်ပါ) အရောင်းရဆုံး စာရင်းမှာ လောလောဆယ် နံပါတ် 12 ၊ အဖတ်အများဆုံး စာရင်းမှာ နံပါတ်4ချိတ်နေတဲ့ ဒုတိယ ကမ္ဘာ စစ် နောက်ခံ ဝတ္ထု တစ်ပုဒ် ပါ ဒုတိယ ကမ္ဘာ စစ် ၁၉၃၀-၁၉၄၀ နှစ်များဆီ က နာဇီ ဂျာမနီ တို့ရဲ့ လက်အောက် ကို ရောက်နေတဲ့ အီတလီ နိုင်ငံ မီလန် မြို့ မှာ ရှိတဲ့ သူလိုကိုယ်လို ၁၆-၁၇ နှစ် အရွယ် ပီနို ဆိုတဲ့ ကောင်လေး… Continue reading Beneath A Scarlet Sky by Mark Sullivan
May 26, 2017 zinyawlwinLeaveacomment
I kept telling myself to get over it and I know it’s gonna be something I’d look back and joke about in some time later , it could be months or years. Despite I also found myself unconsciously pondering the reasons why even though I knew exactly why. Was it just something I could have… Continue reading Heartbreak
အခုနှစ်လ သုံးလ မှာ စာဖတ်ဖြစ်နေလို့ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေ ညွှန်းချင်တယ် မတ်လ က ခရီးသွားတုန်း က ရန်ကုန် လေဆိပ် က ဝယ်လာတဲ့ The Girl with Seven Names by Lee Hyeon Seo ဆိုတဲ့ မြောက်ကိုရီယား မှာ မွေး အဲ့မှာပဲကြီးပြီး မြောက်ကိုရီးယား ရဲ့ မှိုင်းတိုက်ခံရမှုတွေ နဲ့ နေထိုင်လာပြီးမှ အသက်ဆယ့်ရှစ်နှစ် မပြည့်ခင် ကမ္ဘာ ကြီး ကို စူးစမ်းလိုစိတ်နဲ့ တရုတ်ပြည်ကို ထွက်ပြေးလာပြီး ပြန်သွား လို့ မရတော့လို့ တရုတ်ပြည်မှာ ကြီးပြီး ဒုက္ခတွေ ဘယ်လို ရောက်တဲ့ အကြောင်း နောက်မှ တောင်ကိုရီးယား ကို ရောက်လာတဲ့… Continue reading Book recommendations
Book Review , Everything Everything by Nicola Yoon
Book recommendation 📚📚📚📚📚📚📚📚📚 အရမ်းထူးဆန်းတဲ့ မွေးရာပါရောဂါ တစ်မျိုး ခံစားနေရတဲ့ အဲ့ရောဂါ ကြောင့် အလုံပိတ်ထားတဲ့ ဖန်ပေါင်းချောင်လို အိမ်ထဲ ကနေ အပြင်ကို လုံးဝ ထွက်မရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ၊ အပြင်ထွက်လိုက်လို့ အပြင်လေ နဲ့ ထိရင်တောင် အသက်သေ သွားနိုင်လောက်တဲ့ ရောဂါ တစ်မျိုးကို ရထားတဲ့ အဲ့ ၁၈ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေး က နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ပျင်းရိငြင်းငွေ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ သူ့ ဘဝကြီးမှာ တနေ့တနေ့ စကိုက်ကနေ စာသင်လိုက် စာအုပ်တွေ ဖတ်လိုက်နဲ့ သူငယ်ချင်း မရှိ အိမ်ထဲ မှာ သူ့ အမေ ရယ် သူနာပြု နစ်ယောက် ရယ် ဆိုတာ အပြင် သူ့ဘဝ မှာ… Continue reading Book Review , Everything Everything by Nicola Yoon
Book Review လရိပ်ပိုးမျှင်
May 26, 2017 May 26, 2017 zinyawlwinLeaveacomment
စာရေးဆရာမ အသစ် သော်တာအေးလဲ့ ရဲ့ လရိပ်ပိုးမျှင် ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး လုံးချင်းဝတ္တု ကို ဖဘ မှာ သူများတွေ ညွန်းထားတာ ကို တွေ့လို့ ဖတ်မိတယ် ညွန်းထားသလောက်လဲ ကောင်းတယ် အရေးအသား က ကောင်းလွန်း လို့ တစ်ထိုင်တည်း ဖတ်လို့ ပြီးသွား တဲ့ စာအုပ် တစ်အုပ်ပါ ရှယ်လီ ဆိုတဲ့ ၂၂ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေး တစ်ယောက် နာဂစ် ကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ လတ်ပွတ္တာ မြို့လေး နဲ့ ရွာလေး တွေမှာ အကူုအညီ ပေးနေတဲ့ အန်ဂျီအို တစ်ခု မှာ အလုပ် ရသွားတယ် ၊ အိမ်နဲ့ ခွဲပြီး လာရတဲံ အကြောင်းရင်း… Continue reading Book Review လရိပ်ပိုးမျှင်
sayontonee on Tranquility in Sukhothai
zinyawlwin on Tranquility in Sukhothai
zinyawlwin on Buddhism and me
thamiliniguna on Buddhism and me
My life , My music